नेपाल रेडक्रसमा ‘डेन्जर भाइरस’लाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी ! - लोकसंवाद
आश्विन ५, २०७७, सोमबार
काठमाडौं । भक्त खवास नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पुर्व कोषाध्यक्ष हुन् । आफ्नो समयसम्म उनीहरुको यो समुहले रेडक्रसमा राम्रै मस्ती गर्‍यो ।२०७७ साउन १३ गते संजीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई कार्वाही गर्दै सरकारले नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेपछि खवासले सार्वजनिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ मा निकै अर्थपूर्ण ‘स्टाटस्’ पोष्ट गरे । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् ‘रेडक्रसको मामिलामा मा. अ. (अमृत) अर्याल ज्युले कम्बल ओडेर चार माना घ्यु खाएको कुरा सार्वजनिक भयो । तर, दुई माना पचाउन नसक्ने भइ आगामी कांग्रेसको महाधिवेशनमा पखाला लाग्ने भयो पो भन्छन त ...खोइ कुरा बुझ्नै ग्राहो भो ...के हो के ?
खवासले नाम लिएका अमृत अर्याल मोरङ घर भएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सामाजिक संघ संस्था विभाग प्रमुख छन् । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको अगुवाईमा रेडक्रसको भ्रष्टचारमा चुर्लम्मै डुबेका संजीव थापा नेतृत्वको समुहलाई हटाई साउन १३ गते तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । नयाँ तदर्थ समितिमा रहनेहरुको नामावली नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य अर्यालले छनोट गरेका स्रोतको भनाई छ । मन्त्री गुरुङको सक्रियतामा गठन गरिएको नयाँ तदर्थ समितिमा पनि अपवाद बाहेक कलंकित र दुर्गन्धित अनुहार नै हावी भएपछि व्यापक असन्तुष्टी चुलिएको छ । नयाँ तदर्थ समितिले आजै सपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गरेको छ ।
तदर्थ समितिमा अध्यक्ष एनजिओ फेडेरेशनका पुर्व अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनालाई चुनिएको छ । उनी नेकपाको कोटाबाट अध्यक्ष बनाइएका हुन् । उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वकेशर मास्के, महामन्त्री पिताम्वर अर्याललाई बनाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवा निवृत मास्के करिव पाँच दशकदेखि रेडक्रस अभियानमा छन् । गुल्मी जन्मथलो भएका महामन्त्री छनोट अर्याल करिव २६/२७ वर्षदेखि रेडक्रसकै कर्मचारी छन् । बिडम्बना ∕ रेडक्रसलाई सबैभन्दा बढी दोहोन गर्ने उनी चर्को विवादका पात्र हुन् । नेपाल रेडक्रसलाई सधैं दुहुनो गाई बनाएर दुनो सोझ्याइ रहने पात्र भित्र उनी पहिलो, दोस्रो नम्वरमै पर्छन । नेपाल रेडक्रसभित्र पिताम्वर अर्याल, उमेश ढकाल, मोना अर्याललगायत ‘डेन्जर भाइरस’ का रुपमा सुपरिचित नाम हाे ।
नेपाल रेडक्रसको महामन्त्री छनोट गरिएका पिताम्वर अर्यालका बाबु चन्द्रकान्त आजीवन जस्तै गुल्मी जिल्लाको रेडक्रसको सभापति भए । यसै मेसोमा नातावाद हावी गर्दै ०४९/०५० सालतिर छोरो पिताम्बरलाई सिडिसी नामक परियोजनाको पाचौं तहमा नियुक्त गरी सिन्धुली जिल्लामा जागिर खुवाउन छिराएका थिए । त्यसको एक/डेड वर्षमा काठमाडौं सरुवा गराए । अनि कुनै प्रतिस्पर्धा बिनै अर्याल ०५२/०५३ तिर अधिकृत भए । ०५६/०५७ मा बरिष्ठ अधिकृत र ०५८/०५९ मा निर्देशक भए । पिताम्वर अर्यालले रेडक्रसलाई दोहन गर्नुसम्म गरेपनि जीवनमा आन्तरिक परीक्षा निर्देशक हुँदा एक पटक मात्र दिएका छन् । तर, त्यो पनि उनैलाई निर्देशक बनाउन बनाइएको मापदण्डभित्रबाट मात्र । उनी रेडक्रसभित्र जुनिएर तथा युवा विभाग, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास र डिजाष्टरका निर्देशक बन्न सफल भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार अर्याल रेडक्रसभित्र सबैभन्दा बढी आफन्तलाई घुसाउने अगुवाभित्र पर्छन । ‘उनले रेडक्रसको स्रोत र साधन दोहन नगरेको क्षेत्र नै छैन’, स्रोत भन्छ । कतिसम्म भने उनले आफुसँग थोरै मात्र असहमतहरुलाई अप्ठ्यारोमा मात्र पारिदिएका छैनन । जागिर समेत खाइदिएका छन् । निर्देशक भए लगत्तै उनी नेदरल्याण्डमा पढन गए । रोचक के भने नेदरल्याण्डमा पढन् जाने भएपछि उनले सालो मनमोहन घिमिरेलाई सुरुमा युवा स्वमंसेवकको रुपमा नेपाल रेडक्रसमा भित्र्याए । त्यसको एक महिनापछि अधिकृतको नियुक्ती दिलाए । अर्यालले नेदरल्याण्डबाट एपिएच गरेका छन् । तर, रमाइलो यो छ कि अर्यालको ‘थेसिस’ भने रेडक्रसमा अधिकृतको जागिर खाँदै सालो मनमामेहन घिमिरेले लेखिदिएका थिए ।
महामन्त्रीमा छनोट भएका अर्यालले सालो घिमिरेलाई रेडक्रसकै लेटर प्याड प्रयोग गरी अमेरिकाको भिसा दिलाएका थिए । घिमिरे अमेरिका जाँदाको खर्च समेत रेडक्रसले नै व्यहोरोको थियो । भिनाजु अर्यालको जोडबलमा अमेरिका पुगेका घिमिरे त्यहीको बासिन्दा बनिसकेका छन् । यस हिसावले रेडक्रस महामन्त्री नियुक्त अर्याल मानवओसार पसारमा संलग्न पात्र समेत हुन् । रेडक्रसको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी अर्यालले सालोलाई अमेरिका पठाउनु मानवओसार पसार भएको जानकारहरु बताउँछन् । भतिजी कल्पना अर्याललाई पनि उनले रेडक्रसमा जागिर खुवाएका छन् । अर्यालले रेडक्रसमा जागिर खुवाएका पात्रहरु डेड दर्जन बढी रहेका स्रोतको भनाई छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री पार्वत गुरुङ स्वयंले रेडक्रसभित्र राजनीति र पार्टी हावी गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अघिल्लो वर्षको जेठमा संजीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिले ठूलो भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला पारेपछि त्यसलाई भंगगरी प्रा. डा. विश्व केशर मास्केको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, अध्यक्ष थापाले अदालती ‘सेटिङ’ मिलाएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराएका थिए । त्यस यताको यो १४ महिना नेपाल रेडक्रस चरम संक्रमणबाट गुज्रियो । जानकारहरुका अनुसार २०७७ साउन ७ गते मन्त्री गुरुङले मन्त्री निवास पुल्चोकमा रेडक्रसको परिवर्तनको पक्षमा उभिएका दीपेन्द्र ढकाल, दीपक घिमिरेलगायतलाई निम्त्याएर ढकाललाई महामन्त्री, घिमिरेलाई कोषाध्यक्ष बनाउने आश्वासन र बधाई दिएका थिए । साथै भोलिपल्ट नागरिकता र ‘समरी’ बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, त्यसको १२ घण्टा नबित्दै रातभरमा यसरी पार्टी राजनीति हावी गराए कि साउन ८ गते बिहानै राजनीतिकरण गरेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपालाई रेडक्रसको तदर्थ समितिमा राख्ने प्रतिनिधिको नाम दिन पत्रचार गरे । मन्त्री गुरुङको यो संदिग्ध शैलीपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र संघ/संस्था विभाग प्रमुख अमृत अर्यालले खेल्ने मौका पाए । स्रोतका अनुसार ढकाल महामन्त्री र घिमिरे कोषाध्यक्ष हुने जानकारी पाएपछि निवर्तमान अध्यक्ष संजीव थापाले सानेपामा अखडा जमाएर ‘कालो कांग्रेस’ अर्याललाई महामन्त्री बनाएका थिए । यसका लागि थापाले प्रवक्ता शर्मा र केन्द्रीय सदस्य अर्याललाई ३५ लाख रुपैयाँ बुझाएको सानेपा परिसरमा चर्चा छ ।
‘संजीव थापाका कर्तुतहरुलाई ओझेलमा पारी भित्रभित्रै ‘सेटिङ’ मिलाएर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन नमिल्ने तारतम्यका निम्ति पिताम्बर अर्याललाई महामन्त्री बनाईएको हो’, स्रोत भन्छ ‘महामन्त्री नियुक्त अर्याललाई रेडक्रसप्रति कुनै माया छैन । रेडक्रसको महामन्त्री भएर प्रोफाईल बढाउने अनि फेरि फेडेरेशनमा जागिर खान जाने उनको नियत हो । रेडक्रसमा उनी कार्यरत रहँदा उनले गरेको भ्रष्टाचार बिरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । त्यस्ता पात्रलाई कांग्रेसका केही नेताले पैसा खाएर रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थाको महामन्त्री बनाए ।‘
०७५ जेठ ३ गते नै तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भइ सकेका छन् । तर, मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा बसेर बनाएको सूची भने निकै रोचक छ । उनले रेडक्रसको ३१ सदस्यीय तदर्थ समितिमा क–कसका मान्छे राखेको गोप्य सूची बनाएको लोकसंवादले फेला पारेको छ । जसमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, संघीय सांसद बिजय सुब्बा, रेडक्रसको निवर्तमान भ्रष्ट अध्यक्ष संजीव थापा लगायत क–कस्को कोटामा सदस्य, पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्नु परेको मन्त्री गुरुङले गोप्य सूची बनाएका छन् । भलै, उनले बनाएको यो सूची भर पर्दो भने छैन । किनभने मन्त्री गुरुङले नेकपा केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद तथा नेकपा संघ/ संस्था विभाग प्रमुख विजय सुब्बाको सिफारिसमा आधा दर्जन बढी सदस्य नियुक्त गरेको देखाएका छन् ।
तर, सुब्बा स्वयंले सार्वजनिक संञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री गुरुङले गठन गरेको तदर्थ समितिको खरो बिरोध गरेका छन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. सुब्बाले लेखेका छन् ‘रेडक्रस शुद्धिकरण अभियानका धेरै अभियान्तालाई नराखेर र हटाएर अन्याय गरियो । भ्रष्ट कार्यसमितिका सहयोगी र मतियारलाई राखियो । शुद्धिकरण अभियानलाई साथ नदिएकालाई राखियो । कसता कस्तालाई महत्वपूर्ण जिम्मा दिनु पर्छ भन्ने पनि जानकारी देखिएन । रेडक्रसलाई स्वच्छ मान्छेहरुको समुह बनाइएन । विभिन्न चलखेलको खेल मैदान बनाइयो । भंग गरिएको कार्यससमितिका सर्मथकहरुलाई यसमा बस्न लाज पनि नलागेको देख्दा अचम्म लागेको छ । व्यक्ति सिफारिस गर्ने नेताहरुलाई रेडक्रसको महिमा र गरिमा थाहा हुनु पर्दथ्यो । संस्थाको लागि अयोग्य र नालायकहरुलाई सिफारिस नगर्नु पर्दथ्याे । तर पनि भ्रष्ट कार्य समिति भंग भएको छ । खुशी लाग्यो । स्वच्छ रेडक्रसका लागि मेरो अभियानको अन्तमा म हारे । आजीवन सदस्यको नाताले यति भन्ने अधिकार दावी गरे ।’ सुब्बाको यो स्टाटसले मन्त्रीको गोप्य सूचीलाई पुरै खण्डन गर्दैन र ?’
आलमको मुद्दामा फाइल मगाउन सर्वोच्चको आदेश
प्रदेश नं १ को पाश्र्वचित्र सार्वजानिक
केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडियाे बुर्तिबाङ
साधनाको शेष : ज्ञानाग्निमा अज्ञानता आफै आहुतिमा जलेर चिरकालका लागि भस्म हुन्छ
आइसोलेसनको नियम तोड्नेलाई १५ लाखसम्म जरिमाना
चीनमा गरिबी निवारणका लागि ५ वर्षमा १५ खर्ब युआन खर्च
जापानमा कोरोना संक्रमित थपिन थाले, हालसम्म ७९ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
डिशहोमको दशैंमा डवल धमाका: हप्तामा २ जना भाग्यशाली ग्राहकहरुले एक /एक लाख नगद उपहार